Barashada hab-nololeedka bulshada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nyamko Sabuni, wasiirka is dhexgalka iyo sinnaanta
Barashada hab-nololeedka bulshada
Publicerat lördag 5 september 2009 kl 15.14
Dawladda dalkan Iswiidhen ayaa ku talo jirta iney waajib qasab ah ka dhigto barashada hab nololeedka bulshada, hortiiba kolka uu shakhsigu dalka ku cusub yahey.
- Is dhexgalka ama la qabsashada bulshadu macnaheedu wuu ka ballaaran yahey in ruuxu isku fillaado iyo inuu barto luuqadda waddanka looga hadlo oo keliya. Waa mid ku salleeysan ka qeeyb qaadashada hoowlaha bulshada, dareen ah inuu dalku waajib kugu leeyahey adna aad ku leedahey, sida ku sheegtey maqaal ey ku daabcadey Nymsko Sabuni, wasiirka isdhexgalka iyo sinnaantu. Sidoo kale waxey wasiiraddu sheegtey inuu dhowaantan soo bixi fikir middaa la xiriira.
- Cid walba ee ku dhaqan ama ka hoowlgasha dalka waa iney ogsoonaadaan macnaha habka dimoqoraadiyadda, sinnaanta, xuquuqda shaqsiga iyo sinnaanta, iyo sidoo kale xorriyadda dhallaanku u leeyihiin iney doortaan dhabaddey qaadi lahaayeen, sida ey sheegtey Sabuni.
Taasi macnaheedu maaha ayey qortey wasiiraddu iyada oo hadalkeedii sii wadata, in la gudbiyo fikirka ah macnaha iswiidhishnimmada, ee waxey tahey in la ogsoonaado qiimaha ee fikiradda aas-aaska bulshada ee ku dhisan xurmadda.